Gaas “Wuu sii kordhi doonaa xiriirka nagala dhaxeeya dowladda Federaalka” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gaas “Wuu sii kordhi doonaa xiriirka nagala dhaxeeya dowladda Federaalka”
Mareeg.com: Madaxwaynaha maamul-goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shalay hortegay Golaha Wakiilada maamulkiisa ayaa ka hadlay xiriirka ka dhaxeeya maamulka Puntland iyo dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya.
Cabdiweli oo ay su’aalo weydiiyeen xubnaha Golagha Wakiilada Puntland ayaa sheegay in maamulka Puntland iyo dowlada federaalka ah ay ka dhexeeyaan arrimo badan oo muhiim ah, sidaas darteedna loo baahan yahay in la xoojiyo wada shaqaynta labada dhinac.
‘’Xiriirka nagala dhexeeyo dowlada Federaalka Soomaaliya wuu sii kordhi doonaa waxa uuna hadda marayaa meel wanaagsan inta harsana waan sii xoojin doona’’ ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Gaas ayaa tilmaamay in wada hadalku yahay furaha kalsoonida ummadda, wuxuuna xusay in wada shaqaynta labada dhinac ay tahay lagama maarmaan.
Madaxweynaha ayaa intaas ku daray in wada shaqaynta wanaagsan uu saldhig u yahay ku dhaqanka dastuurka u degsan dalka.
C/raxmaan Faroole oo ahaa madaxweynihii ka horeeyey C/weli Gaas ayaa xiriirka u jaray dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxaana weli Puntland ku sugan siyaasyiniin doonaya iney lagu sii socdo jidkii Faroole.